Iyaga Oo Raggaas Haysta Ayay Koobka Iska Tuuray-Vincent Kompany Oo Dariskiisii Man United Hadalo Ku Ganay. - Gool24.Net
Iyaga Oo Raggaas Haysta Ayay Koobka Iska Tuuray-Vincent Kompany Oo Dariskiisii Man United Hadalo Ku Ganay.
Kabtankii hore ee kooxda Manchester City ee Vincent Kompany ayaa ku dooday in Manchester United ahayd kooxdii iska tuurtay koobkii maalintii abid ugu xamaasada badnaa ee Premier league ku dhamaaday ee sanadkii 2012 kii.
Vincent Kompany iyo kooxdiisii Man City ayaa koobkoodii ugu horeeyay ee Premier League waxay ugu guulaysteen qaabkii ugu layaabka badnaa taariikhda Premier League.
Kooxdii Roberto Mancini ee Manchester City ayaa daqiiqadihii ugu danbeeyay ee xili ciyaareedka waxay koobka Premier league ka hor qaadeen Man United oo kulankeedii sii guulaystay oo koobka isa siisay laakiin Vincent Kompany ayaa tilmaamay qaabkii ay Sir Alex Ferguson iyo wiilashiisii koobka u tuureen.
Xili ciyaareedkaas waxay Man United waqtiyo xaasaasi ah barbaro la gashay Everton waxayna guuldarooyin kala kulantay Wigan iyo Manchester City wuxuuna Kompany muujiyay sida ay Red Devils u khaldantay.
Sergio Aguero ayaa ilbidhiqsiyadii ugu danbeeyay ee xili ciyaareedkaas waxa uu goolka koobka la qiimaha ahaa ka dhaliyay kooxda QPR waxaana murugo ku soo dhamaaday xili ciyaareedkii Sir Alex iyo Man United oo banaanka garoonka Sunderland oo ay guul ku gaadheen koobka ku sugayay.
Vincent Kompany oo Gary Lineker ugu waramayay BBC Sport ayaa isaga oo ka hadlaya xili ciyaareedkii labada Manchester dagaalka wayni dhex maray waxa uu ku yidhi: “Xaqiiqdii inta ugu badan ee xili ciyaareedku uu socday waxaanu ahayn kooxda ka fiicnayd, xaqiiqdii United noocaas ah ayaa koobka iska tuurtay”.
Sababta uu Kompany ku aaminsan yahay in kooxdii Sir Alex ee 2012kii ay koobka iska tuurtay ayuu ku yidhi: “Sababtoo ah anaga qaab ciyaareedkayagu joogto ma ahayn. Waqtiyada qaar fantastik ayaanu ahayn, kadib waxaanu qaadanaynay waqtiyo guuldarooyin aan la qeexi karin iyo xaalado intii xili ciyaareedka lagu guda jiray”.
Vincent Kompany ayaa soo qaaday magacyada waa wayn ee United joogay iyo in uu haddana koobku farahooda ka baxsaday wuxuuna yidhi: “Muu ahayn xili ciyaareed degan, waxaanad ka fikiraysaa Ferguson, Rio Ferdinand oo difaac ah, Vidic, Evra…….. koox wayn ayay ahayd. Dhamaan raggaas oo jogay haddana wali way iska bixiyeen”.
Vincent Kompany oo kooxdiisii waqtigaas ee uu Mancini hogaaminayay amaanaya ayaa yidhi: “Waxyaabo layaableh ayaanu samaynay. Markasta oo aanu kooxdayada fursad ku helno waxaanu awood u lahayn in aanu guulaysano 8,9 ama 10 kulan oo xidhiidh ah”.